Khaya ngezenzo ezinhle - Folk efaneleka amazwi, imishwana ukuthi babe ukumelana omkhulu zomlando, wedlula ezizukulwaneni ngezizukulwane.
Umlando azalelwa izaga
Khaya Mthethwa - umkhiqizo temdzabu, eyenziwe zenkulumo. Ukushintshwa kwalo kwabonisa indlela izici zokuphila kazwelonke, izindlela zokuphatha, ubuhlobo bakho bomkhaya, izindinganiso zokuziphatha, ukuhlola ukuziphatha, ukuphila amasiko. Phela, ubuciko amazwi lalivela e inkulumo abalimi, ababazi, coachmen, ngensimbi, abazingeli, Cooper. Pushkin uthe yena wazi ngokwazi wafunda eMoscow ulimi esilucwecwana, okusho ukulalela amazwi, izaga, ukuthi enenhlamba inkulumo yakhe Prosvirnov - owesifazane abhake isiko isinkwa zesonto.
Yini edonsela ngemifanekiso
Khaya ithumba ukuphila Ukufunda ulunika usebenzisa eliyindilinga, eziphambili umqondo ozungezayo. Lapho sithi "awukwazi wenze omelet ngaphandle kokuphula amaqanda", sibona phambi kwethu ukhonkolo kakhulu umsebenzi isithombe Umgawuli. Kodwa sinawo umuntu engqondweni okuthile: eqinile, izenzo ngisho ukubulala nakanjani abathintekayo kanye nalabo azisetshenziswa kuwo.
Khaya ngezenzo ezinhle thina nje ngoba iqiniso, iyiphi kuwo kungaba zisuswe, akukwazi ngobuciko noma engamanga. It is ngqo owazalwa ukuphila umkhuba, esekelwe nakho izizukulwane eziningana zabantu umsebenzi kabani nangemithandazo ukudala lokuqhubeka ukugeleza ukuphila. Futhi singasebenzisa zwi esifanayo nsuku zonke iqoqo, hhayi nje kwansuku zonke, izimo kanye nemicimbi.
Capacious Folk mfanekiso
abantu amafomu Small ukugxilisa ingqondo eziyisisekelo zefilosofi of the ukwazi kazwelonke njengoba kwakhiwa futhi sekungamakhulu ngamakhulu eminyaka zikhona, ephelezelwa eziningi ukuhlolwa zomlando. Lena eziyisisekelo, Izikhumbuzo eziyisisekelo, imibono ephathelene nokuphila kanye nokufa, iqiniso namanga, isaga ngezenzo ezinhle ubulungisa futhi esintwini.
"Indali ekahle ngokuqinile" - Isaga sithi. Futhi le nkolelo Yokuxhumana ezimibalabala: "Okuhle it is hhayi ovuthayo, musa minza." Uma sikhuluma hle enzo ukuthi bahlala amabili eminyaka, yebo, kusho hhayi iyunithi iBhayibheli ngohlelo lokulandelana kwezenzakalo - eyikhulu, futhi igama elithi ezanikezwa umuntu. Lokhu kusho ukuthi imemori wezenzo ngeqophelo eliphezulu eside ukusinda umuntu. Ngaphezu kwalokho, lokhu imemori ngakho ngokuqinile linamathele ukuphila ukuthi "inja akakhohlwa izinsuku ezimnandi zakudala."
zokuziphatha Ukusekela zabantu
IzAga zomusa nezenzo ezinhle amelela isenzo esihle enobuhle njengoba into yemvelo, okuyinto amanga emvelweni yomuntu: yinto enhle akekho lifihle, kodwa akudingeki hype, udumo eziwubukhazikhazi: "ngesenzo Good ngokwayo incoma," okungukuthi liyazikhulumela . Futhi, ngokungafani eligadulayo (okubi), sihambahamba buthule.
"Into Good esandisa omuhle" ukusakazeka kwalo kanye nokuhlanganiswa. "Umuntu omuhle futhi sokufundisa kahle." Umuntu onjalo zifaniswa umthombo wokukhanya.
izinto Kudalelwe abantu okuhle kuletha inhlonipho nodumo kuye ngubani wakwenza - ngakho ukufundisa izaga ngendoda nezenzo zakhe ezinhle. Akumangalisi ngoba umuntu ongelusizo njalo uthola indawo yayo efanele - ekhoneni ebomvu eqhugwaneni.
"Noma ubani owenza okuhle, ukuthi uNkulunkulu uyobavuza" - la mazwi efanayo ukuma ngokuqiniseka ukuthi isenzo esihle kuyinto emuva ngokuqinisekile impendulo izinhlangothi zazo ziyalingana. Kodwa lokho akuyona yonke: ukwenza izenzo ezinhle - kungakho ikusasa labo siqu ukwenza okujabulisa kakhudlwana. "Siyakwamukela ukwenza - hlekisa ngokwabo." Kodwa labo babe akekho ikhona, isikhathi esihle ezimbi.
Good - okubi, okubi
nokuziphatha okuhle okuphikisana okubi, okuyinto (netaga vigilantly kakhulu ukukubona) lisekelwe ngokuqinile umhlaba. Sithi ngesikhathi esisodwa ukuthi engasho lutho lwegama elithi "ukuncika" ishintshile. Uma abantu besikhathi sethu, behlanyiswa izinkinga kwesisindo, kwencazelo isimo ekahle nebala layo siqu ngokomzimba, ulimi etemibhalo Russian usamkhumbula obukhulu obubangelwa - bekhuluma okubi, okubi.
"Awu, lokho umcebo efuna nokubi - ezandleni zakho." Izinkulumo ezinjalo, lapho isenzo okuhle nokubi njengoba abaphikisi umusi, inganikelwa. Kuzo kukhona subtext ezijulile: Uma ucabanga ngakho, asikwazi ukubona lokho uhlelo okubi, okubi owandile nomaphi nandaba manifest, ukunganakwa, ukunganaki, kuba njalo ngakwesokunene, kuyilapho okuningi okuhle kudinga umzamo. "Bheka Good, futhi okubi ngokwayo kuyofika." Futhi uma ukunaka umsebenzi omuhle akwanele, Isaga sithi, ngokwanele ngakho ngokubi.
Uma ubuhle kumele uyifuna ngokuqhubekayo, njengoba kufundiswa ohlakaniphile sicaphune izinganekwane, ungakwazi uyivule indoda eligadulayo. "Ngo-amakhoba (e doti ezisele ngemuva amabele) okusanhlamvu".
IzAga futhi amazwi aphathelene nezenzo ezinhle chasiselwe yokugcina namazwi abanezinhloso, okungukuthi, izwi elakhulunywa ilingana isenzo ngempumelelo. Futhi ngokuqinisekile nesenzo ethize, imakwe ngokunembile. "Okuhle izwi wesango lensimbi izovula." izwi Friendly uzolinikela ezandleni zomunye wabaphathi ngoba endleleni, ikwazi ukwakha indlu, kodwa okubi ongabhubhisa ke. A amazwi omusa, sikhulunywa ngendlela, ufaniswa imvula kule sizini eyomile. Ikhono ukuthola futhi pha Ngamanye amazwi ukwesekwa saga wembula ukubaluleka umuntu kweqiniso, ingcebo yakhe - kanye abangenamakhaya kuyoba acebile uma ungathola igama elihle.
Khaya ngezenzo ezinhle zokuthi kungani izingane
Ingxenye ezinonileyo umcebo ngamazwi - esiyisaga kwakhiwa wonke umuntu: ubudala futhi encane, abacebile nabampofu. Ingane ezwa futhi wakhumbula, benamandla izitatimende, okushiwo ngalo yaphelela, mhlawumbe ukuwuvula kuphela lapho usukhulile. Atishaye zihlelekile, egcwele evumelanayo uhlobo amazwi eklanyelwe kugcizelele inkumbulo ukuthi uzowenza unyaka wonke. Empeleni, lesi kwakuwukuphela kwendlela ukulondoloza lesi saga njengoba umzekeliso omfushane, kusho ngokudlulisa ulwazi ngesikhathi lapho ukwazi ukufunda nokubhala wayengeyena mass. Khaya, ngempela, kufanele 'ephila' abantu.
Khaya kalula zikhunjulwe njengoba ingane futhi ngoba ngokuvamile nephimbo elikhanyayo kakhulu, ngisho asinazo izithombe okuhlabayo, kuyindida noma ukudlala: "Okuhle kuhle, kodwa mncane eyodwa ubambo nengxenye" kusho ukuthi inja elihle lingcono kunamafutha indoda mncane.
Kukhona isaga mayelana nezenzo ezinhle nezenzo nge ezifundisayo slant ecacile didactic. Phezu kwabo abangayikuba bathi ngokuqondile ihloselwe izingane noma intsha. Inherent kuzo amathiphu isikhathi wenza, njalo futhi yonke ofanelekayo: "Into Good ukwenza akukephuzi."
Phakathi kwabo kukhona ezinye ukuthi ngqo abonisa lokho okufanele sisifunde kusukela zisencane - okuhle. Ngoba ke ingqondo embi ngeke zisebenze. Esinye isexwayiso poslovichno: musa ukudumisa wena, ukwenza isenzo esihle. Ake abantwana bangafunda ubisi lukanina, ukuthi kuhle akusizi ukuba abantu bahlale zibe nenzuzo.
Ezinye izilimi, futhi baqonde okushiwo close
Uma sicabanga yezaga abantu ezahlukene ngemisebenzi emihle, isimo sengqondo kwakhiwa okuyinto kule nezinye izimo zemvelo kanye zomlando, siyabona ukuthi izaga yonke indawo futhi ngaso sonke isikhathi yaphakamisa ngokuletha hle enzo.
AmaNgisi athi: "Igama elihle lingcono kunamafutha ingcebo."
izaga Chinese yabonisa ngaphezulu isinqumo esiwujuqu nesibonisa nakanjani osho ukuthi iyagula neze beat okuhle, futhi lowo muntu omuhle neze eba mpofu. Into Good - it is a tour de force, ngoba ungumuntu olungile, nezulu usizo.
Armenia uthi inkemba alanele elingakwazi isinkwa.
"Akubona bonke abantu - amademoni okubi" - Bathi eJapane, futhi okusikhumbuza owaziwa saga Russian ukuthi uthi ukukhanya akukho ngaphandle kwabantu okuhle. Kodwa nesitatimende ezinhle, amahle okuyizici zabantu abenziwe ekusithekeni futhi wasitholela umvuzo olusobala, asenza sicabange kancane. Yebo, ngempela, kungcono ukuthi ukwazisa yesenzo esihle kuqinisekisiwe.
Kodwa isaga Indian mayelana nomsebenzi omuhle kubukeka sengathi onomfutho komunye indaba umusho, eligoqiwe okukhulu kwengqikithi ethi: "Ngubani akasabeli intukuthelo Ethukuthele, silondoloza kokubili - kokubili yena nabanye."
Nokho, ukhuluma ngani letifanako kanye netintfo letehlukile izaga ezivela ezingxenyeni ezihlukahlukene zomhlaba, kufanele kukhunjulwe ukuthi ukudluliswa akakwazanga ukumsiza ukulolonga uhlamvu original futhi ucinge ubunikazi phraseology yakhe kancane sengathi Russified.
Imibono Eminingi Stockholm - enhloko-dolobha yaseSweden
Kungani Indwandwe emi ngomlenze owodwa emanzini?
Ukuze amaseli webhaktheriya libhekene khona lokho? Ikakhulukazi isakhiwo kanye umsebenzi iseli webhaktheriya
Gel varnishes "Opie": Izibuyekezo ikhasimende
Disqus amazwana uhlelo.
Uhlobo ukuguqulwa. Round futhi TRUNC umsebenzi in the "Pascal"
Design of izitebhisi owawusemzini womzalwane: izici Ukukhetha
Sauce ukuze shawarma, okubangela ukuba nenhliziyo emnyama. Indlela ukupheka usoso ngoba shawarma?